Carbamate အုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးများ – Marlarmyaing
Antibiotic (ပဋိဇီဝ) အုပ်စုဝင်ပိုးသတ်ဆေးများ
Neonicotinoid အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများ
Synthetic Pyrethroid အုပ်စုဝင် ပိုးသတ်ဆေးများ
ဓါတ်မြေသြဇာနှင့် ကွန်ပေါင်း ၊ ကွန်ပလက် ဓါတ်မြေသြဇာများ
How to control pest
Annual Dealer Reward
Comics – ပြာနီ
Marlarmyaing for All. Let's grow together !
အမ် – ကာဘို ၂၀ % အီးစီ
သီးနှံ ဖျက်ပိုး တစ်ဧကနှုန်း ထား (စီစီ) စပါး ၊ ပြောင်း ၊ ဂျုံ ဆစ်ပိုး ၊ ပိုးလောင်မီး ၊ နှံစုပ်ဂျပိုး ၊ ဖြုတ်စိမ်း ၊ ဖြုတ်ညို ၂၀၀ – ၃၀၀ ပဲတီစိမ်း ၊ မတ်ပဲ ၊ မြေပဲ၊ကုလားပဲ ၊ ပဲစင်းငုံ၊ နှမ်း ၊ ဝါ ဖိုးလမင်းကျိုင်း ၊ ဖြုတ်ပိုး ၊ သရစ်လှေးပိုး ၊ ပျပိုး ၊ ရွက်ထွေးပိုး ၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး ၊ ငမြှောင်တောင် […]
အမ် – သိုင်အိုကဒ် ၃၇.၅ % အက်(စ်) စီ
အောက်ပါအညွှန်းအတိုင်း သုံးစွဲပါ။ ရေ (၄) ဂါလံဝင်ဆေးဖျန်း တစ်ပုံးလျှင် (၅၀ – ၁၅၀ ) ဂရမ်နှုန်း သီးနှံအမည် ဖျက်ပိုး နှုန်းထား (စီစီ / ဧက) ဝါ ရွက်စားခူ ၊ သီးလုံးဖောက်ပိုး ၊ နှာတံရှည်ကျိုင်း ၊ ဝါဂွမ်းပိုးနီကောင် ၄၀၀ – ၈၀၀ ကြံ ပင်စည်ထိုးပိုး ၊ ခေါင်ညွန့်ထိုးပိုး ၄၀၀ – ၈၀၀ ပဲမျိုးစုံ ငမြှောင်တောင် ၊ ထွာကောင်စိမ်း ၊ လှေကျိုင်း ၊ ပဲတောင့်ထိုးပိုး ၊ ပဲဂျပိုးစိမ်း ၂၅၀ – ၅၀၀ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ငမြှောင်တောင် ၊ ရွက်လိပ်ရွက်ကပ်ပိုး ၊ ထွာကောင်စိမ်း […]
အမ် – ကာဘရိုင်း ၈၅ % ဒဗလျူပီ
ဆေးသုံးစွဲရန်အညွှန်း သီးနှံ ဖျက်ပိုးများ ဆေးနှုန်းထား (ဂရမ် / ဧက) မရိတ်သိမ်းမီ နောက်ဆုံးအသုံးပြု သင့်သည့်ရက် ပြောင်း ငမြှောင်တောင် ၊ ပင်ဖြတ်ပိုး ၊ ပင်စည်ထိုးပိုး ၆၀၀ – ၁၀၀၀ ၁၄ နှံစားပြောင်း ပင်စည်ထိုးပိုး ၊ ဖြုတ်ပိုး ၊ ငမြှောင်တောင် ၆၀၀ – ၁၀၀၀ ၁၄ ဝါ သီးလုံးဖေါက်ပိုး ၊ ရွက်စုံစားပိုး ၊ သီးထိုးကျိုင်း ၊ ဖြုတ်ပိုး ၊ ငမြှောင်တောင် ၊ […]
အမ် – ကားတက် ၅၀ % အက် (စ်) ပီ
၁။ အသုံးပြုရာတွင် ကြိုတင်သတိပြုရမည့် အချက်များ (၁) အမ် – ကားတက်သည် ပိုးချည်မျှင်ထုတ်ပိုးများကို အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည်။ ပိုးစာပင်စိုက်ခင်းများကို ရှောင်ပါ။ (၂) အမ် – ကားတက်ကို ဘော်ဒါဆေးဖြင့် ရော၍သုံးလိုပါက ရောစပ်ပြီး ချက်ချင်းသုံးစွဲပါ။ (၃) ပန်းပွင့်နေသော စပါးခင်းတွင် အမ် – ကားတက်ကို မသုံးပါနှင့် ။ (၄) ပန်းပွင့်ချိန်တွင် အဖြူမှအပ အရောင်ရှိသောပန်းပွင့်များပေါ်သို့ မဖျန်းရ ၊ အရောင်များ လွင့်ပြယ်သည်။ ၂။ သုံးစွဲရန်အညွှန်း ရေ (၄) ဂါလံဝင် ဆေးဖျန်းပုံးတစ်ပုံးလျှင် အမ် – ကားတက်ဆေး (၂၀ – ၄၀) ဂရမ်နှုန်း ရောစပ်ပက်ဖျန်းပါ။ […]
အမ်ဖျူရမ် ၃ % ဂျီ
အသုံးပြုနည်း သီးနှံ ဖျက်ပိုး နှုန်းထား (ကီလို/ဧက) စပါး ကြက်သွန်မြိတ်ပိုး ၊ ဆစ်ပိုး ၊ ဖြုတ်ပိုးများ ၊ လှေးပိုး ၊ ဖြုတ်ညို ၊ ပင်စည်ထိုးပိုး ၆- ၈ မြစ်ဖုနီမတုတ် ၊ ယူဖရာ (နီတို) ၊ ရွက်ဖျားဖြူနီမတုတ် ၁၀ – ၁၅ မြေပဲ ၊ ပဲမျိုးစုံ မြေတွင်းအောင်းပိုး ၊ အဖူးထိုးပိုး ၊ နီမတုတ် ၊ ဖိုးလမင်းကျိုင်း ၁၀ -၁၂ ဟင်းသီးဟင်းရွက် ပင်ဖြတ်ပိုးများ ၊ လှေးပိုး ၊ ပျ ၊ ယင်ဖြူ […]
Marlarmyaing Public Company Limited